Iingoma ezintsha zityhilwe kwi-Oppo K3 kwiposta yayo esemthethweni | I-Androidsis
U-Oppo okwangoku ulungiselela ukumilisela fowuni Na K3 e-China, ebonakala ngathi lilandela Na K1.
Ngoku, phambi kokumiliselwa kwefowuni, okuza kwenzeka nge-23 kaMeyi, inkampani yabelane nge- ipowusta yesixhobo esitsha ngeWeibo, etyhila iinkcukacha zayo.
Ipowusta etyhiliweyo ngezantsi iyakuqinisekisa oko isixhobo siza kunikwa amandla yiprosesa Snapdragon 710 nguQualcomm. Ikwabonisa ukunikezelwa kwe-smartphone, eqinisekisa ukuba inezinto ezinokubakho ngaphambili.
Ipowusta ye-Oppo K3
Ngasemva, iselfowuni ineesenzi zekhamera ezimbini, ibekwe nkqo kwindawo ephezulu yeziko. Akukho sibonisi somnwe esibonakalayo, esiqinisekisa ukuba ifowuni iza kuza nenkxaso ye-in-display sensor yeminwe.
Ifowuni ikwabonwa kutshanje kwilayibrari yemveliso yase China Unicom, eneenkcukacha ezininzi zokubalulwa kwayo. Apho ibhalisiwe kunye nenombolo yemodeli 'PCGM00' kwaye ibonakalisiwe nge-Snapdragon 710 esele ikhankanyiwe, kunye I-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi.
Kwelinye icala, ngokweengxelo ezithile ezivuzayo, iya kuza ngokhetho lwemibala emithathu: I-Nebula Purple, White, kunye noMnyama. Ifowuni iza kufika ngohlobo lwe-USB-C kwaye inokuxhotyiswa yifayile ye- I-3,700 mAh ibhetri ene-20 W inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza.
Okunye ukuvuza kuye kwaxela oko I-Oppo K3 ijongeka ngokufana kakhulu kwi-smartphone Realme X esanda kukhutshwa. Ukulandela oku, kunokuza kwiiyantlukwano ezintathu ze-RAM kunye neROM: 6GB + 64GB, 6GB + 128GB, kunye ne-8GB + 128GB.
Malunga namaxabiso, kufanele ukuba ibize kakhulu kuneReal X., eyaphehlelelwa ingekho ngaphantsi kwee-euro ezingama-194 ukutshintsha kuhlobo lwayo lwexabiso eliphantsi, oluqukethe i-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yeROM.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iingoma ezintsha zityhilwe kwi-Oppo K3 kwiposta yayo esemthethweni